Romance na mmekọrịta | Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
Ka oge na-aga, ịhụnanya nwere ike ịdaba
Di na nwunye a choro ka ha nwee onwe ha
Mmegharị obere na onyinye nwere ike ime ọtụtụ
Ndi ima ama ọtọn̄ọ?
Nri abalị na-atọ ọchị
Ekwela ka romance ahụ na-ehi ụra ọzọ
Karịsịa mgbe mmekọrịta dịruru ruo ọtụtụ afọ, ọ nwere ike ime mgbe ụfọdụ na nkwalite mmekọrịta gị na ibe ya na-ebelata ntakịrị. Nke a bụ ihe dị mma, ma di na nwunye nwere ike ime ihe gbasara ya, n'ihi na ọ dị mkpa na ọ bụ mmekọrịta dị na ya. Iji mee ka ọrụ a nwee ọganihu, ọ dị ezigbo mkpa na ndị mmekọ abụọ ahụ gosipụtara ọchịchọ na ọchịchọ ime ka ịhụnanya dịghachi na mbụ.
Iji mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịghachi ndụ
E kwuwerị, mmekọrịta na-agụnye mmadụ abụọ mgbe nile. Ugbu a, n'ezie, ajụọ ajụjụ banyere otú ịhụnanya nwere ike isi bụrụ akụkụ nke ndụ kwa ụbọchị. E nwere ọtụtụ ụzọ e nwere ike isi nweta mmekọrịta ịhụnanya na mmekọrịta.
Di na nwunye na-enwe nri abalị
Mgbe mgbe, ọ bụghị ihe dị mkpa iji tinye nkwalite mmekọrịta romance na mmekọ, n'ihi na ọbụna obere mmegharị na-enyere aka.
Otu romance kwesịrị ịdị na-adị mgbe nile, n'ihi na di na nwunye pụrụ irite uru site na ọnọdụ ịhụnanya. N'ihi nke a, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji jide n'aka na romance na-alaghachi na mmekọrịta ma na-eme ka ndị mmekọ na-agakọ ọnụ. Inye nri abalị ma ọ bụ inye obere onyinye nye onye ọlụlụ na-enyere aka ịme ka mmekọrịta ahụ dị ndụ.
Ọbụna ihe omume ntụrụndụ na-ezukọta nwere ike ime ka ọhụụ dị nso na onye òtù ọlụlụ ahụ dị ka ihe dị mma. Mgbe ụfọdụ, o nwere ike isiri gị ike igosipụta mmegharị ịhụnanya n'oge na-adịghị anya, ma mgbalị ahụ na-aba uru mgbe nile, dịka mmekọrịta jupụtara n'ịhụnanya nwere ike inye ndụ maka ndị mmekọ abụọ ahụ obi ụtọ. Ma n'ihi gịnị ka ọnọdụ ịhụnanya ji eme ka ọ daa n'ọnọdụ ụfọdụ?
Ọ gwụla ma ọ bụrụ na e weere ihe ndozi kwesịrị ekwesị, ọ ga-ekwe omume na mmetụta ndọrọ mmekọahụ na mmekọrịta gafere oge. Ná mmalite nke ọtụtụ mmekọrịta, mmasị na onye òtù ọlụlụ dị nnọọ ukwuu, ya mere, a na-eme mgbalị dị ukwuu iji mee ka onye ahụ nwee mmekọrịta ma mee ka ọ nwee obi ụtọ.
Ma n'otu oge na mmekọrịta na-abịa oge mgbe ndụ kwa ụbọchị na-amalite. A na-ewere ịhụnanya nke onye òtù ọlụlụ mgbe ụfọdụ n'emeghị ihe ọ bụla, na mgbalị ndị dịbu ụzọ dị mkpa n'ime mmekọrịta ga-emesị belata. Na-enweghị mmegharị ịhụnanya, ọ bụ ihe dị mma na ndụ kwa ụbọchị na-arịwanye elu na nkwalite mmekọrịta na mmekọrịta na-adị mkpụmkpụ.
Ọbụna n'ime mmekọrịta ọhụrụ dịnụ, ọ nwere ike ime na mmekọrịta ahụ na-ebelata ngwa ngwa.
N'ezie, ọ na-eme ka uche zuru oke gbochie nke a. E nwere ọtụtụ ụzọ isi gbochie mmekọrịta ahụ site n'ịghara inwe ịhụnanya. Mkparịta ụka ahụ kwesịrị ịnọgide na-abụ isiokwu dị ugbu a na mmekọrịta. Otú ọ dị, ọ bụghị nanị otu n'ime ndị mmekọ nwere ike inye mmegharị ịhụnanya. Kama nke ahụ, ọ ga-abụ na mmasị nke ndị mmekọ abụọ ahụ na-elekọta romance.
Mkparịta ụka ahụ na mmekọrịta ọ bụghị n'onwe ya. Di na nwunye a na-enwe mmekọrịta ma a bịa n'ịnọgide na-enwe mmetụta ịhụnanya. Mgbe ndị mmekọ abụọ ahụ gbalịsiri ike ime ka onye nke ọzọ nwee obi ụtọ, ọ na-adịrịrị mfe ịmepụta ndụ na-adị kwa ụbọchị nke nwere ike inye afọ ojuju na mmekọrịta ahụ.
Site n'iji ndị mmekọ abụọ eme ihe, enwere ike ime ka mmekọrịta ahụ dịgasị iche iche, n'ihi na nke ọ bụla, onye ọ bụla nwere echiche dịgasị iche banyere mmegharị ịhụnanya. Onye ọ bụla na-eche ihe ndị ọzọ karịa ihunanya na ọ bụ ya mere ndị di na nwunye kwesịrị iji chebara ihe onye ọlụlụ ga-achọ ka mma. N'ime mmekọrịta nke na-aga n'ihu ruo oge ụfọdụ, onye ọlụlụ na-enwetakarị ịmara ibe ya nke ọma ma mara ihe ọ masịrị ya.
Nke a na-eme ka ọ dị mfe ịkwadebe ihe na-achọ onye òtù ọlụlụ ma mee ka o nwekwuo ohere na a ga-ahụ mgbalị ahụ dị ka mmegharị ịhụnanya. Ọ bụrụ na ndị mmekọ abụọ ahụ na-arụ ọrụ maka mmekọrịta ha ma gbalịsie ike iji chekwaa ma ọ bụ mee ka mmekọrịta ahụ dịghachi, ohere ọ ga-enwe iru ihe mgbaru ọsọ ahụ dị nnọọ ukwuu karịa ma ọ bụrụ na otu onye ọlụlụ na-achụso ihe mgbaru ọsọ ahụ. Ugbua na obere mmegharị a na-ekwe nkwa mmalite nwere ike ime.
Ọbụna obere ngosi nwere ike ime ka mmekọrịta gị na ibe gị nwee mmekọrịta ịhụnanya. Dịka ọmụmaatụ, ọ naghị etinye mgbalị dị ukwuu ịzụta mkpọtụ okooko osisi mgbe ọrụ gasịrị ma wetara ha na onye òtù ọlụlụ gị. Ọtụtụ ndị na-enwe obi ụtọ mgbe ha nwetara okooko osisi dịka onyinye.
Ihe ọzọ a na-atụghị anya ya nwere ike ime ka onye ahụ nwee mmekọ. A sị ka e kwuwe, inye onyinye n'ụdị mmekọrịta ọ bụghị naanị na ụbọchị dịka Krismas, Ụbọchị Valentine ma ọ bụ ụbọchị ọmụmụ. Onyinye, nke a na-atụghị anya ya, na-enyekarị ọṅụ, dịka onyinye, nke onye na-atụ anya dị ka onye na-eme ememe ọha na eze n'ehihie na nke nta ka ọ bụrụ ihe.
Ya mere, onyinye dị otú ahụ nwere ike ime ka onye ahụ nwee obi ụtọ. Ọ dịghị mkpa otú nnukwu ma ọ bụ dị ọnụ ugbu a bụ. Ọ na-agụnye akara ahụ, n'ihi na ọ na-eme ka o doo anya na enwere mmetụta dị ike maka onye òtù ọlụlụ. Kaosinadị, onyinye ndị dị ịtụnanya nke ụdị a ekwesịghị ime kwa ụbọchị, ma ọ bụghị na ha ga-abụ ngwa ngwa. Obere onyinye a kwesiri idobe ha anya ka ha wee nwee ike inye aka n'inwe ihe omuma n'ime mmekorita.
Ọbụna okwu ịhụnanya, akpọ ma ọ bụ chịkọtara na akwụkwọ ozi ịhụnanya, bụ ụzọ dị mma igosi onye òtù ọlụlụ, mmetụta ndị a. Mmegharị obere na onyinye nwere ike inyere gị aka ịme ka ndụ gị dị ndụ ma ọ bụ mee ka ọ dị ndụ. Ma, gịnị mere ịhụnanya ji dị ezigbo mkpa na mmekọrịta?
Mkparịta ụka na mmekọrịta dị mkpa
Site n'igosipụta ịhụnanya ma ọ bụ omume ịhụnanya na-egosi onye na-eche banyere onye òtù ọlụlụ ya. Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ na-echefu ịghọta ihe ha nwere. Ezi mmekọrịta kwesiri ka a nọgide na-echekwa ya ka nkwonkorita ya na mmekorita ya adighi efu.
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị nwere ike ime ka ha abụọ nwee obi ụtọ na oké oge
Ya mere, ọ bụ ihe dị mma ma ọ bụrụ na ndị mmekọ abụọ ahụ na-agbalị ịnọgide na-enwe mmetụta ịhụnanya na mmekọrịta. Ọchịchị anaghị egosipụta onwe ya. Ndị a na-agụnye creativity na nkà, n'ihi na ọ dị mma, mmegharị ịhụnanya nke nwoke na nwanyị kwesịrị ịdịtụ iche, iji gbochie ha ịghọ oke oke. Ọ bụrụ na ịhụnanya ahụ, n'agbanyeghị mgbalị nke ndị mmekọ, ma oge ụfọdụ na-apụ n'anya site na mmekọrịta, yabụ ọ dị mkpa iji hụ na ọ laghachiri.
Ọbụna ma ọ bụrụ na mmetụta ndọrọ mmekọahụ na-apụ n'anya na mmekọrịta, ọ pụtaghị na ọ kwụsịrị kpam kpam na ruo mgbe ebighị ebi. Kama nke ahụ, enwere ohere iji jide n'aka na mmekọrịta ahụ na-alaghachi na mmekọrịta ahụ ma eleghị anya ọbụna karịa ike karịa ya.
Oge ezumike n'ụlọ
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ ga-esiri gị ike ịmaliteghachi ịhụnanya ahụ, mana n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụ mgbalị dị mkpa, n'ihi na mmekọrịta nke jikọtara ya na romance bụ ihe dị mma nye ndị mmekọ abụọ ahụ. Ma ònye bụ n'ezie ihe ndị ọzọ na-atọ ọchị? Ndi nwanyi ma obu nwoke?
Ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke ọ bụ ihe jikọrọ ha?
Obu ihe na-adighi ekwe omume ikwu ma ndi nwanyi ma o bu ndi mmadu nwere obi uto, n'ihi na onye o bula na-achoputa ihe ozo site n'okwu a bu romance. Ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke nwere ike inwe mmetụta nke ịhụnanya. Mkpakọrịta nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ndị mmekọ abụọ ahụ na-enye nwa ntakịrị romance na mmekọrịta ahụ ma si otú ahụ na-akwalite mmekọrịta obi ụtọ. N'ihi ya, ndị inyom na ndị nwoke nwere ike ịdị n'otu. Ma, olee otu o ga - esi mee ka di na nwunye nwee ike inwe mgbasasị ịhụnanya na ebe dị mma?
Otu ihe na-emekarị, nke nwere ike ịme ka ọ bụrụ ezigbo ịhụnanya, bụ nri abalị na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Site na iri nri n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ, di na nwunye ahụ agaghị akwadebe nri abalị ha, ma kama itinye uche na mkparịta ụka.
A na-ele nri abalị n'otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị mma dịka ndokwa ịhụnanya nke oge ntụrụndụ di na nwunye. N'abalị obi ụtọ, di na nwunye ahụ nwere ohere ịbịakwute ibe ha iji wusie mmetụta ịhụnanya ha ike. Ọ bụghị nanị na ị na-eri nri abalị n'otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ike ime ka nkwalite mmekọrịta dịkwuo mma. Ihe ndi mmadu na-eche bu kwa ndi ruru eru iji mezuo ihe mgbaru ọsọ a.
Gini ka mmadu kwesiri iche n'echiche di egwu?
Ihe ijuanya dị ịtụnanya nwere ike iche dị iche. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume ịhazi oge mgbede ịhụnanya maka onwe gị wee tinye ya ka o wee mee ka onye ahụ nwee obi ụtọ n'ụzọ dị otú a. Ọbụna otu mgbede na ụlọ nke gị nwere ike iji mee ka ị nwee mmetụta ịhụnanya.
Nwee obi ụtọ na ụlọ gị
Egwú obere, ebe dị mma, ihe nkiri ịhụnanya na ihe ọkụkụ ọkụ. Ọbụna site n'enyemaka nke obere ihe ndị a, enwere ohere ịnweta mgbede ịhụnanya, nke di na nwunye nwere ike ịnụ ụtọ ya. Ọdịdịghị mkpa ịhapụ ụlọ gị ozugbo ọ bụla ị kwadebere maka mgbede ahụ.
Soro oge gị na onye gị na ya na-enwe mmekọrịta
Uhuruchi obi ụtọ na sofa nwere ike ịbụ ezigbo ịhụnanya. N'ezie, e nwere ụzọ ndị ọzọ nwere ike isi nyere gị aka ịnọgide na-enwe mmekọrịta ịhụnanya. Di na nwunye na-enwe mmasị iji ohere ha na-arụ ọrụ oge ha nwere ike ijide ohere ma chọọ maka ntụrụndụ, nke ndị mmekọ abụọ ahụ nwere ike imekọ ọnụ.
Iji na-emeso onye òtù ọlụlụ gị
N'ezie, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ijikọta ịhụnanya na-adị kwa ụbọchị na mmekọrịta. Dịka ọmụmaatụ, ndị mmekọ ahụ nwere ike itinye aka na ibe ha iji gosi na ha nwere mmasị na ihe omume ntụrụndụ nke onye ibe. Site n'inwekọrịta ọdịmma, ndị di na nwunye nwere ohere iji oge ha n'efu.
Tụkwasị na nke a, ọ ga-ekwe omume ịchọta ihe omume ntụrụndụ nke na-eme ka ndị mmekọ abụọ ahụ nwee ọṅụ, n'ihi na mgbe niile, e nwekwara ihe ntụrụndụ ndị a na-ewere dị ka ịhụnanya. Dịka ọmụmaatụ, di na nwunye nwere ike ịme egwú ma melite nkà ịgba egwú ha, ma jiri nkà tinye egwú ndị ọhụrụ a na-ahụ na ịgba egwú.
Otu ihe omume ntụrụndụ na-emetụ aka nwere ike inye aka mee ka mmekọrịta ahụ dịkwuo mma. N'ụzọ dị otú a, ọ pụkwara igosi onye òtù ọlụlụ na enwere mmasị dị ukwuu na ya. Ozugbo o jisiri ike weghachite mmekọrịta ahụ na mmekọrịta, ndị mmekọ abụọ ahụ kwesịrị ijide n'aka na ha agaghị ada ụra ọzọ.
Di na nwunye di iche iche nke nwetakwara mmekorita omuma na ndi ha na ha na-eme ka ha mara na inwe mmekorita nke nwoke na nwanyi nwere ike isi ike. N'ihi nke a, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji jide n'aka na mmetụta ịhụnanya ahụ agaghị ada ụra ọzọ. Okpukpe dị egwu bụ akụkụ dị oke mkpa n'ime mmekọrịta ọ bụla. Ọ bụ ya mere na ọ gaghị efu ya na mmekọrịta ọ bụla.
Ọbụna obere mmegharị ịhụnanya nwere ike inye aka n'eme ka mmekọrịta gị na ibe gị ghara ileghara ya anya. Ikwu okwu ọma ma ọ bụ okwu mkparị ma ọ bụ okwu mkparị ga-esiri ike ma onye ahụ ga-ahụ ya. Nleta na ụlọ oriri na nkwari akụ ma ọ bụ mgbede dị mma n'ụlọ bụ ụzọ dị ukwuu isi soro onye gị na ya na-anọrị na-enwe mkparịta ụka, n'ihi na ọ dị mkpa, mkparịta ụka zuru oke na mmekọrịta dị mkpa. Enwere ike ime obere ihe iji gbochie ịlụ di na nwunye na ụra.
Ndepụta nke ndị isi nke United States / USA
Kedu ka m nwere ike isi mee ka nkwanye ùgwù nke ụmụaka sikwuo ike?